Tanora sy ny soratra : tsy lefy fa niova endrika ny vakiboky | NewsMada
Tanora sy ny soratra : tsy lefy fa niova endrika ny vakiboky
Tsy mamaky boky intsony ny tanora. Tsy liana amin’ny soratra, variana amin’ny teknolojia, sns, ny tanora. Ampahany kely ihany no marina amin’ireo, rehefa tena zohina.
Aiza ho aiza ny hoavin’ny boky? Lohahevitra resahina matetika, ary mitovy foana ny valiny: mihalefy ny fitiavana mamaky boky eo amin’ny tanora. Rehefa tena zohina anefa, ny fitiavana mamaky ilay boky taratasy no mihalefy fa tsy ny fitiavana mamaky. Niova endrika fotsiny izany, indrindra hatramin’izay nisian’ny “internet” sy ny teknolojia vaovao izay.
Lafo ny boky, ka raha tsy efa tsy maintsy toy ny boky hanaovana fikarohana amin’ny fianarana sisa, tsy misy mividy izany. Na maro koa aza ny trano famakiam-boky, mbola manahirana kokoa ny tanora ny mindrana azy ireny noho ny mandeha eny amin’ny “cybercafé “.
Eo indrindra no nampiova ny vakiboky. Efa malaza ny boky elektonika, vakina amin’ny ôrdinatera, finday, “tablettes”, sns. Maimaimpoana ny ankamaroan’ireo boky, ka manao “téléchargements” sisa. Mora kokoa araka izany, ny vidiny, satria izay hahavitan’io fotsiny no aloa. Efa mihamora sy maro mpanana toy izany koa anefa ny fitaovana famakiana azy.
Tonga amin’ny sampanan-dalana araka izany ny hoavin’ny boky. Ilay endrika taratasy eo ihany, fa mila hirosoana amin’izay ny boky elektronika.
Mila mailo ihany anefa, satria hatreto aloha tsy mbola loharanom-pahalalana azo antoka ny “internet”. Misy fahalalana tsy ho hita raha tsy anaty boky taratasy mihitsy, ary izay ihany no azo antoka ny nihaviany. Na izany aza, misy fanombohana ny zava-drehetra, ka tsara raha manomboka mamaky boky amin’ny alalan’ny teknolojia izay tsy mbola nanao izany.